CNC machining foibe
Zhan Hang, ny ara-barotra sy ny orinasa mpamokatra entana combo, dia matihanina amin'ny milina CNC fitaovana, milina sy ny orinasa indostrialy automatique fitaovana fikarohana sy ny fampandrosoana, ny famokarana sy ny varotra amin'ny avo-teknolojia orinasa.
Ny fitantanana ara-teknika ekipa manana mihoatra ny 10 taona ny indostria sy ny orinasa mpamokatra entana milina traikefa. Ny tena ahitana vokatra: CNC lathes, machining foibe, truss milina, mpiara sandriny milina, CNC rafitra. Products mifandraika amin'ny aerospace, mpampatsiro hanina, orinasa fiara, fiarandalamby fitaterana, ny fanabeazana, fitsaboana, injeniera milina, madio angovo, milina fitaovana, fiarovana orinasa sy ny saha.
Miandrandra ny hoavy isika, dia hiezaka hanampy ny orinasa hifindra amin'ny "orinasa mpamokatra entana" ny "mamorona", manome mandroso, azo ampiharina, vahaolana ara-toekarena ho an'ny mpanjifa mba hamoronana zava-dehibe kokoa.